सनि नियोनीले रोजिन् नयाँ दक्षिण अफ्रिकी पति ! अब डेनियल वेबेरसंगको सम्बन्ध के हुन्छ ?
दक्षिण अफ्रिकी अभिनेता मार्क बकनरले डेनियलको भूमिका पाएका छन् भने बायोपिकमा सनीको भूमिका आफै गर्दै्छिन्
मंगलवार, २५ बैशाख २०७५, सगरमाथा पोष्ट
एजेन्सी, बैशाख २५
आफूलाई माया,र काममा साथ दिन बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनीका पति डेनिबियर बीबरले एउटा नयाँ कुरा सार्वजानिक गरेका छन् । बलिउड अभिनेत्री सनी लियानीले दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ पति रोजेको उनका पति (डेनिबियर बीबरले) बताएका छन् ।
सनीको बायोपिक ‘करनजीत कौरः द अनटोल्ड स्टोरी अफ सनी लियोनी’का फिल्मका लागि उनले दक्षिण अफ्रिकी अभिनेता मार्क बकनरलाई रोजेकी हुन् । सनी लियोनीका पतिको रुपमा यी अभिनेता यो फिल्ममा देखिने छन् ।
सनी लियोनीले आफ्नो बन्दै गरेको बायोपिकको लागि आफ्ना पति डेनियलको भूमिकाका लागि दक्षिण अफ्रिकी अभिनेतालाई रोजेकी बताइएको छ । दक्षिण अफ्रिकी अभिनेता मार्क बकनरले डेनियलको भूमिका पाएका छन् भने बायोपिकमा सनीको भूमिका आफै गर्दै्छिन् । सनीका पति डेनियलले अभिनय आफ्नो काम नभएको बताएपछि उनले मार्क बकनरलाई राजेकी हुन् ।
यो फिल्मको सुटिङ दक्षिण अफ्रिकामानै हुने तयारी छ । फिल्म बायोपिक सिरिजमा आउनुका साथै सिरिज जी फाइभको डिजिटल च्यानलमा पनि आउने कुरा निश्चित भइसकेको छ ।